Maxaa ka Cusub Angel Di Maria oo dib ugu soo laabanaya Horyaalka Premier League
Home Horyaalka France Maxaa ka Cusub Angel Di Maria oo dib ugu soo laabanaya Horyaalka...
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Paris Saint-Germain Angel Di Maria ayaa lagu soo waramayaa inuu kasoo muuqday liiska suuqa ee Tottenham Hotspur .
Intii uu furnaa suuqa kala iibsiga bishii Janaayo, kooxda reer France ee PSG ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqeyso kubadsameeyaha Spurs Dele Alli , kaasoo la sheegay inuu doonayo inuu u wareego Parc des Princes.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay L’Equipe , kooxda Premier League ka dhisan ayaa ku jawaabtay inay diiwan gelisay mid ka mid ah xiddigaha hal abuurka ah ee PSG.
Di Maria ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga, taas oo u ogolaaneysa inuu wadahadal la yeesho kooxaha shisheeye ka hor inta uusan u dhaqaaqin xagaaga.
Spurs ayaa la sheegay inay xiriir la sameysay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina si ay u qiimeeyaan in xiddigii hore ee khadka dhexe ee Manchester United inuu xiiseynayo inuu ku laabto England.
32 jirkaan ayaa boos joogta ah ka helay PSG xilli ciyaareedkan, isagoo ka qeyb qaatay seddex gool iyo sideed caawiye 21 kulan uu ka ciyaaray Ligue 1 iyo Champions League.
Previous articleJohn Terry iyo Mason Mount oo fariimo u diray Frank Lampard kadib markii laga ceyriyay Chelsea
Next article5 Ciyaartoy oo Chelsea ah oo boos waayi kara hadii Shaqada uu qabto Thomas Tuchel